umthetho wabucala - me Undress
Ezabucala ibaluleke kakhulu kuthi. Ngakho, siye le nkqubo ukuze ukwazi ukuqonda siqokelela indlela, ukusebenzisa, ukunxibelelana sibhengeze kwaye usebenzise lolwazi lobuqu. Le ilandelayo ichaza wethu umgaqo-nkqubo wabucala.
• Phambi okanye ngexesha yokuqokelela ulwazi lobuqu, siya ukuchonga iinjongo apho ulwazi iye yaqokelelwa.
• Siya kuqokelela kunye nosebenziso kwiinkcukacha zakho kuphela ngenjongo ukwanelisa ezo iinjongo ezithile sithi yaye ezinye iinjongo ehambelanayo, ngaphandle kokuba afumane imvume mntu uchaphazelekayo okanye njengoko kufunwa ngumthetho.
• Siya kugcina kuphela inkcazelo yobuqu logama nje oko kuyimfuneko ukuze kuzalisekiswe abo iinjongo.
• Siya ukuqokelela inkcazelo yobuqu ngokusebenzisa semthethweni ilunge kanye, apho kufanelekileyo, ngolwazi okanye imvume yomntu ochaphazelekayo.
• Iinkcukacha zobuqu kufuneka sihambelane iinjongo apho ngayo kusetyenziswa, yaye, kangangoko kukho imfuneko abo iinjongo, kufanele zichaneke, epheleleyo, kwaye phezulu-ukuya-umhla.
• Siya sikhusele iinkcukacha zakho nge njengezikhuselo benqabisekile ngokuchasene ilahleko okanye ukubiwa, kwakunye nokufikelela olungavumelekanga, ukuvezwa, uyihlele, ukusetyenziswa okanye ukuguqulwa.
• Siya kwenza likulungele abathengi ulwazi malunga imigaqo-nkqubo yethu kunye nezenzo ezinxulumene kulawulo lolwazi lobuqu.
Sizimisele ukuqhuba ushishino lwethu ngokungqinelana nale migaqo ukwenzela ukuqinisekisa ukuba yimfihlo inkcazelo yobuqu ikhuselekile kwaye igcinwe.